Yenza ikhalenda ye-HTML kwi-Python ngamandla
Imodyuli yekhalenda yePython inxalenye yelayibrari ephantsi. Ivumela ukuveliswa kwekhalenda ngeenyanga okanye ngonyaka kwaye inikezela nezinye, ukusebenza kwekhalenda.
Umnxeba wekhalenda ngokwawo uxhomekeke kwimodyuli yomhla. Kodwa siza kufuna kwakhona ixesha lomhla ngeenjongo zethu kamva, ngoko kukulungele ukungenisa zombini kwezi zinto. Kwakhona, ukuze senze ukuhlukana kwetambo, siya kufuna imodyuli. Masibangenise bonke ekuhambeni komnye.
> ukubuyisela ukungenisa, ixesha lomhla, ikhalenda
Ngokungagqibekanga, iikhalenda ziqala ngeveki ngoMvulo (usuku 0), kwintlanganiso yaseYurophu, kwaye iphelela ngeCawa (umhla wesi-6). Ukuba ukhetha ngeCawa njengosuku lokuqala lweveki, sebenzisa indlela ye- setfirstweekday () yokutshintsha okungekho kumhla 6 njengolu hlobo:
> ikhalenda.setfirstweekday (6)
Ukuguqula phakathi kwezi zibini, unokudlula usuku lokuqala lweveki njengengxabano usebenzisa isondyuli ye sys . Uya kuthi ke uhlolisise ixabiso kunye nesitatimende kwaye usethe indlela yokubeka kuqala () ngendlela efanele .
> yokungenisa sys yokuqala = sys.argv  xa kuqala == "6": ikhalenda.setfirstweekday (6)
Ukulungiselela Iinyanga Zonyaka
Kwikhalenda yethu, kuya kuba mnandi ukuba nenhloko yekhalenda efunda into efana ne "Ikhalenda elizaliswe ngePython For ..." kwaye ibe nenyanga kunye nonyaka. Ukuze sikwenze oku, sifuna ukufumana inyanga nonyaka ukusuka kwinkqubo. Le nkonzo yinto enika ikhalenda , iPython inokubuyisela inyanga nonyaka. Kodwa sinesingxaki. Njengoko yonke imihla yenkqubo imanani kwaye ayinayo ifomati engabhalwanga okanye engekho yimiqulu yeenyanga, sidinga uluhlu lwezo zinyanga. Faka uluhlu lonyaka .
> Umnyaka = ['Januwari', 'Februwari', 'Matshi', 'Epreli', 'ngoMeyi', 'ngoJuni', 'ngoJulayi', 'Agasti', 'ngoSeptemba', 'Oktobha', 'ngoNovemba', ngoDisemba ']
Ngoku xa sifumana inani leenyanga, sinokufikelela kule nombolo (ngaphantsi omnye) kwoluhlu uze ufumane igama elipheleleyo leenyanga.
Usuku olubizwa ngokuba "namhlanje"
Ukuqala umsebenzi ophambili () , makhe sibuze ixesha lomhla kwixesha.
> main main (): namhlanje = ixesha lokugqibela.ixesha (datetime.datetime.now ()))
Okumangalisayo kukuba, imodyuli yexesha lomhla ineklasi yosuku . Kule nkalo sifuna izinto ezimbini: ngoku (() kunye nomhla () . Umhla wokuqalisa umhla.datetime.now () () ubuyisela into equlethe ulwazi olulandelayo: unyaka, inyanga, umhla, iyure, umzuzu, wesibini, kunye ne-microseconds. Ewe, asikho isidingo sokuba ulwazi lwedatha. Ukukhupha ulwazi lwedatha yedwa, sidlulisela iziphumo ngoku ngoku () ukuya kwixesha langoku . Isiphumo kukuba namhlanje ngoku iqulethe unyaka, inyanga, kunye nomhla ohlukaniswe yi-em-dashes.
Ukutshixa umhla wamanje
Ukuphula le ncinane yedatha kwiinqununu ezininzi eziphathekayo, simele sihlukane. Singaba ke sinike iindawo kwiimpawu ezikhoyo zangoku , i- current_month , kunye ne- current_day ngokulandelanayo.
> current = re.split ('-', str (namhlanje)) current_no = int (okwangoku ) current_month = nyaka [current_no-1] current_day = int (re.sub ('\_ A0', '', yangoku )) current_yr = int (okwangoku )
Ukuqonda umgca wokuqala wale khowudi, sebenzisa ukusuka ngasekunene ukuya kwesobunxele naphakathi kwangaphakathi. Okokuqala, siyifumanisa into namhlanje ukuze isebenze kuyo njengomtya. Emva koko, siyichitha ngokusebenzisa i-em-dash njenge-delimiter, okanye uphawu. Ekugqibeleni, siwabela ezo zithethe ezintathu njengoluhlu 'olukhoyo'.
Ukuze ukwazi ukujongana nala maxabiso ngokucacileyo kwaye ubize igama elide lenyanga ekhoyo ngaphandle konyaka , sinika isibalo senyanga ku- current_no . Sinokwenza ke ukukhupha kwi-subscript yonyaka kwaye sibone igama lenyanga kwi- current_month .
Kwinqanaba elilandelayo, kufakwe enye indawo yokufaka endaweni. Umhla obuyiselwa kwimihla yamanqaku lixabiso leenombini ezimbini nakwiintsuku zokuqala ezisi-9 zenyanga. Imisebenzi yenzalo njengomnini wendawo, kodwa sinokuthi ikhalenda yethu ibe nedijithi enye. Ngoko-ke asiyikubhalisa ixabiso kuyo yonke into eqala umtya (ngoko '\_ A'). Ekugqibeleni, sibela umnyaka kwi- current_yr , siyiguqulela kwi-integer endleleni.
Izindlela esizozibiza kamva ziza kufuna igalelo kwifomathi epheleleyo. Ngoko ke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba yonke idatha idatha igcinwe kwi-integer, ingafowuni, ifom.
I-HTML kunye neCSS
Ngaphambi kokuba sinyathelise ikhalenda, simele sinyathelise ukuqala kwe-HTML kunye neCSS yekhalenda yethu. Yiya kweli phepha ukuze ikhowudi ukuprinta iCSS kunye ne-HTML yokuqala yekhalenda. kwaye uyikopishe ikhowudi kwifayile yakho yenkqubo. I-CSS kwi-HTML yale fayili ilandela ithempulethi enikezwa nguJennifer Kyrnin, Isikhokelo se-About About Web Design. Ukuba awuyiqondi le nxalenye yekhowudi, unokufuna ukunxibelelana naye ngoncedo lokufunda iCSS kunye ne-HTML. Ekugqibeleni, ukwenza ngokwezifiso igama lenyanga, sifuna umgca olandelayo:
> shicilela '
> ''% (current_month, current_yr)
Ukuprinta iiNtsuku zeveki
Ngoku ukuba isiseko esisiseko sisiphumo, sinokumisela ikhalenda ngokwayo. Ikhalenda, kwinqanaba layo elisisiseko, itafile. Ngoko masenze itafile kwi-HTML yethu:
> shicilela '' '' ''
> Ngoku iprogram yethu iya kushicilela intloko yethu efunwayo ngenyanga kunye nonyaka. Ukuba sele usebenzisa umgca wokulawula umyalelo okhankanywe ngaphambilana, apha kufuneka ufake i - statement - ifom enye ngolu hlobo:
>> ukuba kuqala == '0': shicilela '' '
> NgeCawa > NgoMvulo > uLwesibini > ULwesithathu > uLwesine > uLwesihlanu > NgoMgqibelo
> '' 'enye: ## Nantsi sithatha ishintsho ebhinqa, isigqibo phakathi kwe' 0 'okanye' hhayi '0; Ngoko ke, nayiphi na ingxabano engeyiyo yenze ukuba ikhalenda iqale ngeCawa. ukuprinta '' '
> NgoMvulo > uLwesibini > ULwesithathu > uLwesine > uLwesihlanu > NgoMgqibelo > NgeCawa
Ukufumana idatha yeKhalenda
Ngoku sifuna ukudala ikhalenda yangempela. Ukufumana idatha yekhalenda yangempela, sidinga indlela yekhalenda yenyanga yekholenda () . Le ndlela ithatha iimbambano ezimbini: unyaka kunye nenyanga yekhalenda efunwayo (zombini kwifom eninzi). Ibuyisela uluhlu oluqulethwe uluhlu lwemihla yenyanga ngeveki. Ngoko ukuba sibala inani lezinto kwixabiso elibuyiselwe, sinenani leveki kwinyanga enikeziweyo.
> inyanga = ikhalenda.monthcalendar (i-current_yr, current_no) nweeks = len (inyanga)
Inani leeveki kwiNyanga
Ukwazi inani leiveki ngenyanga, sinokudala i-loop ebalwayo ngokusebenzisa uluhlu () ukusuka ku-0 ukuya kwinani leeveki. Njengoko kunjalo, iya kuprinta yonke ikhalenda.
> kwi-intanethi (i-0, i-nweeks): iveki = inyanga [i] ukuprinta "" x in xrange (0,7): imini = iveki [x] ukuba x == 5 okanye x == 6: classtype = ' enye iveki 'enye: classtype =' usuku 'ukuba usuku == 0: classtype =' yangaphambili 'ukushicilela' '% (classtype) elif day == yangoku-suku: ukushicilela' % s
> ''% (classtype, imini, classtype) enye: shicilela '% s
> ''% (classstype, imini, classtype) shicilela "" shicilela "'' '' '
Siza kuxubusha le khowudi ngomgca-ngomgca kwiphepha elilandelayo.
I '' Loop ihlolwe
Emva kokuba lolu luhlu luqalisiwe, imihla yeveki ixhomekeke kwinyanga ngokuhambelana nexabiso lekhawuntini kwaye inikezelwe ngeveki . Emva koko, umqolo wesigxina udalelwe ukugcina imihla yekhalenda.
I-A for loop ke ihamba ngeentsuku zeveki ukuze ihlaziywe. Imodyuli yekhalenda iprints '0' yonke imihla etafileni engenalo ixabiso elivumelekileyo. Inani elingenanto liza kusebenza kangcono kwiinjongo zethu ukwenzela ukuba sinyathelise iincwadi zeenkcukacha zedatha ngaphandle kwenani laloo mihla.
Okulandelayo, ukuba usuku lukhoyo ngoku, sifanele siluncede ngandlela-thile. Ngokusekelwe kwinqanaba le- td namhlanje , i-CSS yale khasi iya kubangela ukuba umhla okhoyo uhlawulelwe kummandla omnyama endaweni yokukhanya kweminye imihla.
Ekugqibeleni, ukuba umhla ungumlinganiselo ochanekileyo kwaye awukho umhla okhoyo, ushicilelwe njengedatha yecala. Ukuhlanganiswa kombala okwenziweyo kwezi zibanjwe kwisigcaziso seCSS.
Umgca wokugqibela weyokuqala welophu uvala umqolo. Ngekhalenda ishicilelwe umsebenzi wethu ugqityiwe kwaye sinokuvala umqulu we HTML.
> shicilela ""
Ukubiza umnqweno () Umsebenzi
Njengoko yonke le khowudi ikulo msebenzi ophezulu () , musa ukulibala ukuyibiza.
> ukuba __name__ == "__min__": eyintloko ()
Kaloku nje ikhalenda elula ingasetyenziswa nganoma yiphi indlela efuna ukumelwa kwekhalenda. Ngokuxhumela imihla ngemihla kwi-HTML, umntu unokudala kalula ukusebenza kwedayari. Ngenye indlela, umntu unokujonga malunga nefayili yedayari aze abonise ukuba yimiphi imihla ethathwa ngumbala wabo. Okanye, ukuba umntu uguqula le nkqubo kwisikripthi se-CGI, umntu unokukwazi ukuvelisa kwi-fly.
Ngokuqinisekileyo, oku kungokugqithisileyo komsebenzi wekhalenda yekhalenda . Amaxwebhu anika umbono obanzi.
Iimpazamo eziqhelekileyo ngokusetyenziswa kwesiTaliyane: Iimpazamo zegrama zoLwimi lwesiTaliyane
Toyo Ukwazisa i-Versado Noir
Dibana no-Angelo omkhulu uSelaphiel, isithunywa seMthandazo